Osisi na-abịakwute ọkà okwu Energy Sistem ọhụrụ | Akụkọ akụrụngwa
Icanlọ ọrụ Alicante Energy Energy Sistem ka gosipụtara ọhụrụ ụlọ elu ụda 2.1 nke ejiri osisi rụọ, dị njikere itinye n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ anyị. Ekele maka usoro ụda ikuku, a na-ekpochapụ mkpa nke eriri kpamkpam. Anyị na-ekwu maka ya Towerlọ elu Energy g2 Osisi.
Osisi abụwo ihe dị oke mkpa mgbe niile ma a bịa n'inye ya okwu, wee si na ya pụọ ​​na ihe plastik nke ndị na-ekwu okwu dị ala na-enyekarị. Energy Sistem abughi nani na elebara mmebe na ihe di iche iche na igwe okwu ya ohuru, kamakwa ọ na-enye anyị ike zuru ezu iji gboo mkpa anyị niile.
N'ime Energy Tower g2 Wood anyị na-ahụ sistemụ 120W, sistemụ ike nke na-enyekwa anyị ntinye ntanetị S / PDIF na ntinye ihe ntanetị 24 btis / 96 kHz DSP, nke na-enye anyị ogo dị na Hi-Fi . Iji mee ka treble ahụ kwusie ike ma nye ha nkwụsi ike ka ukwuu, etinyela Energy Sistem a silk dome tweeter.
Iji nye njikọ ikuku, Energy Tower v2 Wood nwere njikọ Bluetooth 4.1. Banyere ntinye analog, ụdị ọhụụ a na-enye anyị ntinye RCA na njikọ mmepụta ya mere ọ na-enye anyị ohere nke jikọọ ya na igwe egwu egwu ochie anyị, yana ikwe ka anyị jikọọ ya na ụlọ elu ọzọ.
Ọ bụrụ na batara anyị batrị na ama anyị, anyị nwere ike iji otu kaadị ebe nchekwa ebe egwu dị ma ọ bụ na eriri USB, ebe anyị nwere nchekwa egwu, ka ndị ọrụ ọ bụla wee kpọọ egwu kachasị amasị ha na enweghị nsogbu ọ bụla. Ma oburu na anyi achoghi inu egwu ma kama ige nti na akuko redio, anyi kari ikele ya na redio FM emebere.
N'elu ọkà okwu a, anyị na-ahụ iwu iji nwee ike ịbawanye ma ọ bụ belata olu, kwalite ma ọ bụ weghachite egwu a na-akpọ na mgbakwunye na ngalaba LCD ebe a na-egosi aha egwu a na-akpọ ma ọ bụrụ na anyị na-eji kaadi agụ ma ọ bụ USB stick. Ọnụ nke Energy Tower g2 Wood bụ euro 159 ọ dịkwa ya na weebụsaịtị Energy Sistem site na Machị 16.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Ndị na-ekwu okwu » Osisi na-abịa na igwe okwu ọhụrụ Energy Sistem